ဘိရှမွန်းဒိုး ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
၇၀၃ ခုနှစ်မှာ ထည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးဂိုဏ်းရဲ့ မွန်းဇဲခိဘုရားကျောင်းဖြစ်တယ်။ ဆောင်းဦးမှာ ကျောက်လှေကားတွေက မိုမိဂျိရွက်တွေ ဖုံးလွှမ်းပြီး နီဆွေးနေပြီး နွေဦးမှာ လှပစွာ ညွှတ်ကိုင်းနေတဲ့ဆာကူရာတွေက ဖူးပွင့်နေတဲ့ လှပတဲ့ရှုခင်းကို ခံစားနိုင်ပါတယ်။
Kyōtofu kyōtoshiyamashinaku shu Inariyama-chō 18
လူကြီး ၅၀၀ ယန်း
အထက်တန်းကျောင်းသား ၄၀၀ ယန်း
မူလတန်း ၊အလယ်တန်းကျောင်းသား ၃၀၀ ယန်း
မတ်လ မှ နိုဝင်ဘာလ ၈း၃၀ မှ ၁၇း၀၀
ဒီဇင်ဘာလ မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈း၃၀ မှ ၁၆း၃၀
အရောင်ချယ်သစ်ရွက်တွေဖြင့် သစ်ပင်တွေ အရောင်စွန်းထင်နေတဲ့အခြေအနေကို တွေ့ နိုင်မှာ သေချာပြီး အရွက်တွေ ကခုန်ကြွေကျနေတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ လက်ခပ်ရေစည်ပေါ်မှာ ပေါလောမျောနေတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်က အလွန်လှပါတယ်။
JR အစိုးရပိုင်မြေအောက်ရထားလိုင်း . ခဲအိဟန်း ( Yamashinaဘူတာ ) ဆင်းပြီးနောက် ၂၀ မိနစ် လမ်းလျှောက်
နန်းဇန်းဂျိသည် ဂျပန်တွင်ရှိသော ဇန်းဂျိများထဲတွင်...
ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ပုံမှန်က အစောင့်ခွေးခြင်္သေ့ရှိ...
ညီဖြစ်တဲ့ ဂျွန်းရန်းဘုန်းကြီးနဲ့ အန်းရာခုဘုန်းကြ...
( ဆောင်းဦးရဲ့ ဗဟုသုတအနည်းငယ် ) မိုမိဂျိ ဘာကြောင့်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ ?
( ဆောင်းဦးရဲ့ ဗဟုသုတအနည်းငယ် ) မိုမိဂျိ ဘာကြောင့်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ ? ဒီတစ်ကြိမ်က မိုမိဂျိအရောင်ပြောင်းချိန်ကို သိမယ်ဆိုရင် နည်းနည်းပျော်စရာကောင်းပြီး မိုမိဂျိရဲ့ ဖွဲ့ စည်းမှုနှင့်ပတ်သတ်ပြီး မိတ်...